Gudbiyeyaasha FM-ka - FMUSER
Taxanahan wuxuu ka kooban yahay daraasiin FM ah oo la awoodi karo oo la awoodi karo, oo u shaqeeya sidii mid ka mid ah taxanaha asaasiga ah ee abuurista baahinta FMUSER. Inta badan waxa laga codsadaa kaniisada lagu kaxeeyo iyo tiyaatarka lagu wado, shirkadaha iyo kooxaha, wakaaladaha sharciyeynta, isbitaalada, warshadaha isboortiga, shirkadaha qaranka, iyo idaacadaha bulshada.
FMUSER waa mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha idaacadaha ugu fiican Shiinaha oo leh in ka badan kumanaan xalal baahinta raadiyaha ah ayaa si guul leh loogu abuuray idaacadaha shaqsi iyo kuwa ganacsiba. Waxaan ku hawlannahay soo saarista adduunka oo dhan iyo bixinta dhammaan noocyada qalabka idaacadaha khabiirka ah, laga bilaabo heerka kilowatts-ka awoodda sare ee gudbiyaha FM-ka ee adag (AKA: gudbiyaha FM-ka) ilaa rack-Mount FM-ka gudbiyaha raadiyaha ee dhowr boqol oo heer koronto ah. Dabcan, xirmooyin buuxa oo loogu talagalay istuudiyaha FM-ta ayaa la bixiyaa - laga bilaabo soo-saareyaasha maqalka, miiska istuudiyaha ilaa qalabka isku xirka istuudiyaha ee idaacada FM, oo ay ku jiraan anteenada STL, gudbiyaha STL, iyo qaataha STL oo ay la socdaan qalabyada. Baakadaha Antennas Broadcast FM - Laga soo bilaabo anteenada wareegta ah, anteenada diyaaradda dhulka, anteenada FM dipole, anteenada FM ee raadiyaha gaariga, anteenada FM-ka badan ee FM-ka awoodda sare leh (3 bays, 4 bays, 6 bays, iyo 8 bays waa ikhtiyaari ), oo ay ku jiraan dhammaan noocyada kala duwan ee khadadka anteenada RF iyo qalabyada.
Waa maxay sababta FMUSER FM Gudbiyeyaasha Raadiyaha?
Naqshadaynta Hardware ee soo jiidashada leh - Sida mid ka mid ah qodobbada iibinta ugu wanaagsan marka laga reebo tayada ugu wanaagsan ee bandhigga maqalka iyo baahinta, naqshadeynta qalabka ee gudbiyaha FMUSER FM, si kastaba ha noqotee, waxay durba faa'iidooyin aan xadidneyn u keenay macaamiisheena adduunka oo dhan: oo leh awood 5-heer ah. shaqeynta kordhinta oo ka kooban teknoolojiyad sare oo elektiroonig ah, saameynta stereo-ga wax-soo-saarka waa la hubiyaa. Maxaa ka sii badan, si loo hubiyo xasilloonida xaaladda shaqada ee joogtada ah, naqshadeynta qaab-dhismeedka is haysta, qolof aluminium tayo sare leh oo la sameeyay, nidaamka qaboojinta hawada ayaa la bixiyaa. Muuqaal LCD ah oo dareen leh oo ka shaqeeya soo-bandhigidda soo noqnoqda ee eber ku dhow waxay la macno tahay waxqabadka baahinta weyn ee iibsadayaasha.
Awooda Ikhtiyaarka iyo Joogtada Waxaad ka heli kartaa iibka FMUSER baahinta awoodda gudbinta FM oo daboolaya ugu yaraan 0.1W ilaa in ka badan 1000W, iyo ilaa 10kW + ugu badnaan. Iyo mar kasta oo ay koronto koronto, sii balaadhinta baahinta, taasoo la macno ah gudbiyaasha FM-ta ee qiimaha jaban waxay dabooli karaan raadiyaha, tusaale ahaan, in ka badan 30km gudbiyaha FM-ta ah ee 1000 watts. Sharafta in la yiraahdo sidaas, FMUSER gudbiyaha awoodda sare ee FM had iyo jeer waa doorashada koowaad ee idaacadaha waaweyn ee FM. Si loo hubiyo tayada gudbinta maqalka, waxaanu bixinaa gudbiye FM awood sare leh oo leh awood ka duwan 2kW ilaa 10kW, kaas oo si buuxda u dabooli kara baahiyaha idaacadaha FM-yada ee cabbirada kala duwan. Gudbiyeyaasha FMUSER FM waa kuwo waara oo si wax ku ool ah u xaqiijin kara tayada maqalka ee baahinta FM.
Warshada Waxsoosaarka Heerka Adduunka - Waad ku mahadsan tahay warshadeena gudbiyaha FM, waxaan ku siin karnaa gudbiyaasha FM-yada wax qabad xoogan iyo qiimo jaban iibsadayaasha miisaaniyado kala duwan. Intaa waxaa dheer, si looga fogaado saameynta xun ee ay sababaan xaaladaha kala duwan ee deegaanka ee qolka injineernimada raadiyaha, waxaan isticmaalnay inta badan aluminium aluminium, birta aan fiicnayn, dhalooyinka iyo rinjiga sida qalabka qolofka iyo naqshadeynta qalabka FM-ga, kaas oo hubin kara gudbinta maqalka. waxtarka iyo cimri dhererka.
Kharash yar iyo Tayo Sare - Iyada oo ay ugu wacan tahay tayada sare iyo qiimaha miisaaniyadeeda, taxanaha gudbiyaha FMUSER FM waxaa doorbidaya xiiseeyaasha raadiyaha FM, injineerada raadiyaha, iyo kooxaha kale ee idaacadaha iyo shaqaalaha, iyo qaar ka mid ah sida 1000 watt iyo 5000 watt FM gudbiyaasha si weyn ayaa loo isticmaalaa in Codsiyada sida tiyaatarka wadista, kaniisada wadista, wadista baadhitaanada ogaanshaha acid nucleic, dhacdooyinka nool, iyo faallooyinka ciyaaraha ee kala duwan, iwm.
Codsi Kala Duwan - Waxaa hubaal ah in haddii ay tahay baahinta shaqsi ama ganacsi, aad ka iibsan karto ama aad jumlo ku iibsan karto qalabka idaacadaha ee ugu jecel FMUSER. Intaa waxaa dheer, sidoo kale waa ikhtiyaari inaad habayso xalalka baahintaada, xarun gudbiye FM oo jaban, xirmo gudbiye FM oo dhameystiran, iwm.
Taxanaha Gudbiyaha FMUSER FM
Markaan si tartiib tartiib ah u kobcineyno khibradda ku urursan habka wax soo saarka iyo iibinta FM-ta gudbinta baahinta, waad nala soo xiriiri kartaa oo aad na tusi kartaa shuruudahaaga gaarka ah kooxdayada khabiirka RF. Waxaad wax ka beddeli kartaa laga bilaabo sahayda korontada ilaa sumadda calaamadaynta. Waxaanu bixinaa taageero farsamo oo ku salaysan baahiyahaaga. Baahidaada dhabta ah, xooggayaga dhaqaaqa.
Ma noqon karto war xun haddii aad hore u jirtay ama aad u socoto inaad noqoto hawlwadeen idaacad ganacsi!
Intee in le'eg ayuu gudbiye FM baahin doonaa?
Macaamiisha qaar ayaa inta badan na weydiiya qaar ka mid ah aqoonta qalabka raadiyaha ee xirfadlayaasha ah, sida "Sidee loo dhiso idaacad dhamaystiran oo qiimo jaban ah?", ama "Sidee loo doortaa anteenada dipole ee gudbiyaha FM-ta sare? 6-bay dipole anteeno mise 8 bays?", iwm.Arrinta xiisaha lihi waxa ay tahay in ay aad u xiiseeyaan inta ay le'eg tahay gudbiyaha idaacada FM-ta, waxa ayna su'aalo badan oo la xiriira ay hordhigeen injineeradayada RF. Liiska su'aalaha inta badan la isweydiiyo ee ku saabsan kala duwanaanshaha FM-ka iyo saamiga u dhigma.Waxaan rajeyneynaa in saamigan ku saabsan caymiska gudbiyaha ay kaa caawin karto xallinta dhibaatooyinkaaga, haddii aad tahay mid ka mid ah macaamiishayada iyo haddii kale.
Su'aalaha caadiga ah ee la waydiiyo macaamiisheena:
Intee in le'eg ayuu raadiyaha 1-watt gudbin karaa?
Intee in le'eg ayaa 1 watt FM gaari doonaa?
Intee in le'eg ayaa 5-watt FM gudbin doonaa?
Waa maxay kala duwanaanta gudbiyaha 15w FM?
Intee in le'eg ayaa 15w FM gudbin doonaa?
Waa maxay baaxadda kiiloomitir ee gudbiyaha 15W FM
Waa maxay shaxda kala duwan ee gudbiyaha FM?
Intee in le'eg ayaa 100 watt FM gaari doonaa?
Intee in le'eg ayaa 5000 watt FM gaari doonaa?
Intee in le'eg ayaa idaacad FM ah oo 50000 watt ah gaari kartaa?
Sidee loo xisaabiyaa kala duwanaanta gudbiyaha FM/FM kala duwanaanshaha xisaabiyaha?
Arrinta xiisaha lihi waxay tahay, marka macaamiisheena ay rabaan inay ogaadaan baahinta baahinta idaacadahayada, waxaan had iyo jeer horay u sheegaynaa: "Ma lahaan kartid tirada saxda ah ee cabbirka tebinta FM-ta (iyadoon loo eegayn awoodda ama nooca), ilaa Waxaad ku jirtaa shaybaadhka! "Sababta aan tan ugu sharxi karno macaamiisheena ayaa ah in marka loo eego kormeerka kooxda khabiirka RF, waxaa jira wax ka badan hal arrin oo saameeya baahinta baahinta gudbiyaha. Awood radial oo wax ku ool ah (ERP) iyo dhererka goobta anteenada ee ka sarreeya celceliska dhulka (HAAT), iyo doorsoomayaal kale oo badan ayaa sidoo kale ah arrimo muhiim ah oo aan u baahanahay inaan tixgelinno.
Sidaa darteed, si aan ugu qancino macaamiisheena jawaabaha dhabta ah oo aan uga caawino xallinta dhibaatooyinka la taaban karo, injineeradayada RF iyo kooxda iibka ayaa inta badan bixiya tirooyin gaar ah. Tusaale ahaan, macaamiisha wax ka weydiiya daboolida gudbiyaasha tamarta yar, waxaan inta badan nidhaahnaa: "15W FM gudbiyaha wuxuu dabooli karaa ilaa 3k㎡, halka gudbiyaha 25W FM uu dabooli karo ilaa 5k㎡. Haddii aad rabto inaad daboosho baaxad ballaaran. , sida 10k㎡ ama 20k㎡, waa inaad doorataa gudbiyaha 150W ama 350W FM sababtoo ah way ka weyn yihiin gudbinta awooda"
Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah kuwa ku cusub raadiyaha, tirooyinkan saxda ah waxay u keeni karaan ismaandhaaf aan loo baahnayn oo ay ku riixaan arrimo fekeraya kuwaas oo saameyn doona daboolida gudbiyaha raadiyaha FM. Inkasta oo jawaabaha u dhigma ay yihiin kuwo si adag loo guulaystey, haddana waxaan soo koobeynaa arrimaha soo socda ee go'aamin kara daboolka (taas oo macnaheedu yahay ilaa inta ay gaari karaan) gudbiyaha FM:
Hardware la xidhiidha
1. Xaddiga awoodda wax soo saarka war-baahinta (TPO)
TPO waxaa laga soo gaabiyaa "Transmitter Power Output" dhinaca isgaarsiinta wireless, waxay dhab ahaantii tixraacaysaa awoodda wax soo saarka ee uu soo saaro gudbiye, haddii laguu sheego "Tani waa iibkayaga ugu sarreeya ee 5kW FM", markaa "5kW" waxaa had iyo jeer loo arkaa inay tahay awoodda ERP (Awoodda Radiated ee waxtarka leh) halkii ay ka ahaan lahayd awoodda gudbinta dhabta ah. TOP waxay si dhow ugu xidhan tahay kharashka, gadashada, miisaaniyada, iwm., taas oo inta badan sabab u ah caymis ballaadhan oo ku habboon ayaa la socda qiimo iibsi sare oo ka mid ah qalabka idaacadaha sida gudbiyaha FM-ka iyo anteenooyinka raadiyaha FM. Sidaa darteed, TOP, oo ay weheliso faa'iidada anteenada, waa labada arrimood ee ugu muhiimsan ee ay tahay in la tixgeliyo gaar ahaan xilliga hore ee dhismaha idaacadaha, marka aad go'aaminayso noocyada iyo qalabka ugu fiican miisaaniyadaada.
2. Anteenada oo dhigaysa joog ka sarreeya celceliska dhulka (HAAT)
baahinta raadiyaha, HAAT ama EHAAT (HAAT wax ku ool ah), ama joogga ka sarreeya celceliska dhulku dhab ahaantii waxa ay tilmaamaysaa masaafada toosan ee la barbar dhigi karo inta u dhaxaysa goobta gudbinta ( gudbiyaha iyo anteenada ayaa lagu daray) iyo celceliska dhererka dhulka ee dhowr kiiloomitir. Si loo gaaro faham guud oo ku saabsan qodobbada muhiimka ah ee HAAT, qofku wuxuu u baahan yahay inuu ogaado in HAAT asal ahaan ay tahay daboolka anteenada baahinta, waa booska tooska ah ee goobta anteenada ayaa ka sarreysa muuqaalka ku hareereysan. Ka soo qaad inaad taagan tahay meel nadiif ah oo leh goobta lagu rakibay anteenada, waqtigan, adiga iyo goobta gudbinta waxaad joogtaa meel bannaan, ka dib anteenadu waxay gaari kartaa masaafo tobanaan kilomitir ah si loo baahiyo. Haddi booskaagu aanu ahayn meel banaan balse ah meel buuro ah, masaafada baahinta waxa laga yaabaa inay gaadho dhawr kiiloomitir oo keliya. HAAT waxaa si rasmi ah loo cabbiraa mitir, taas oo si weyn loo aqoonsan yahay isuduwidda caalamiga ah, iyo dabcan ururada idaacadaha gobolka sida Guddiga Isgaarsiinta Federaalka (FCC).
Tani waxay sidoo kale ina xasuusineysaa in haddii aad rabto inaad hesho caymiska ugu sarreeya marka gudbiyaha, qaataha, anteenada, iyo qalabyada ay diyaar yihiin, had iyo jeer xasuusnoow inaad meel dhigto anteenada sida ugu macquulsan, si aad u hesho ugu yaraan 60% nadiifinta aagga Fresnel oo hel khadka dhabta ah ee RF ee aragga (LOS), oo lagu daray, waxay kaa caawineysaa inaad iska ilaaliso waxyaabaha xun xun si loo joojiyo kala duwanaanshaha RF ee ballaarinta, sida geedaha cufan iyo dhismayaasha dhaadheer, iwm.
1) Dhererka anteenada hoose awgeed, khasaaraha ku jira fiilada RF waa uu yaraadaa, waxaana laga yaabaa in anteenadu ku shaqeyso xaalad ka sii wanaagsan waqtigan, haddaba ka fikir ganacsiga ka dhexeeya dhererka anteenada iyo tirada fiilooyinka RF ee loo baahan yahay.
2) Kadib kulanka qalabka baahinta qalabka, fadlan hubi inaad fiiro gaar ah u yeelato xeerarka maamulka raadiyaha maxalliga ah ee dhererka anteenada si looga hortago ciqaabta (meelaha qaarkood, ciqaabta dhererka anteenada aan habboonayn ayaa aad u culus).
Tilmaamaha Aagga Fresnel
Talooyin Qeexitaanka Aaga Fresnel ee Soo noqnoqoshada Raadiyaha
Codsiga Aagga jirka
Sida ay u dhaliso gudbiyaha iyo qaataha ayaa ku yaal khadka aragga
Waxa iska leh: hirarka raadiyaha
Waa maxay micnaheedu? Gobolka Fresnel wuxuu u dhexeeyaa anteenooyinka gudbinta iyo helitaanka, farqiga safarka ee u dhexeeya dariiqa toosan iyo dariiqa jaban ee hirarka raadiyaha waa n λ/ 2 waa ellipsoid leh booska gudbinta iyo helitaanka anteenada sida diiradda iyo toosnaanta. jid sida dhidibka. Baaxadda ellipse waxaa lagu go'aamiyaa inta jeer ee hawlgalka iyo masaafada u dhaxaysa labada saldhig. Dhanka isgaarsiinta wireless-ka, si loo hubiyo xaaladaha ugu wanaagsan ee shaqada ee nidaamka oo dhan, hal shay oo muhiim ah ayaa ah in la ilaaliyo aag meel marin ah oo elliptical ah oo u dhexeeya anteenooyinkooda kala duwan ee labada goobood ee baahinta, iyadoo la hubinayo inaysan jirin wax xaddidaad ah, xannibaad la’aan, wax xannibaad ah ma leh. farsamaynta.
Waa maxay sababta ay muhiim u tahay Sababtoo ah faragelin kasta ama caqabad kasta oo ka jirta khadka aragga (LOS) waxay sababi kartaa luminta calaamadda, isgaadhsiinta wireless-ka ee dhibic-ilaa-barta, waxaa muhiim ah in la ilaaliyo khadka aragga ee u dhexeeya labada nidaam ee wireless-ka oo xor ah wax kasta oo caqabad ah.
3. Noocyada anteenada iyo qalabyada loo isticmaalo nidaamka anteenada noocyada anteenada iyo cable coaxial loo isticmaalo qadarka fiilada coaxial ee la isticmaalay
4. Dareenka soo dhaweynta FM-ta ee dhinaca kale
Qodobbo aan laga noqon karin
1. Heerka faaruqnimada ee dhulka agagaarka goobta anteenada cufnaanta ku wareegsan goobta anteenada, sida cufnaanta iyo dhererka geedaha ama dhismayaasha
2. Nooca dhulka u dhow goobta anteenada fidsan ama buuro leh
3. Faragelinta soo noqnoqda raadiyaha iyadoo ay ugu wacan tahay baahinta isdabajoogga ah ee ka baxa idaacada u dhow
Saldhigyada soo noqnoqda ee u dhow ama idaacadaha kale ee ku teedsan isla mar ahaantaana, tusaale ahaan, anteenadu waxa laga yaabaa inay aragto 20 kiiloomitir, laakiin haddii idaacad kale ku taal isla inta jeer ee 20 kiiloomitir u jirta, waxay xannibi doontaa / faragelinaysaa signalka.
Xaqiiqdu waxay tahay: marnaba ma go'aamin kartid daboolida saxda ah ee gudbiyaha baahinta iyada oo aan loo eegin awoodda gudbinta ama sumadaha ay iska leedahay. Nasiib wanaag, waxaad had iyo jeer ka heli kartaa qiyaasta baahinta idaacadaha qaarkood khubarada RF (sidii aan horayba u sameynay).
Tirooyinkaan la qiyaasay waxay sameeyaan alaabo dhab ahaantii - si ay kaaga caawiyaan inaad laba jeer ka fikirto ka hor intaadan dooran gudbiye wanaagsan oo yareeya kharashyada ama kharashyada aan loo baahnayn, ama si fiican loo tixraaco adeegyada iibka ka dib ama taageero farsamo oo online ah ka dib iibsashada gudbiyaha FM.
Dabcan, dhammaanteen waan ognahay in waayo-aragnimadu ay tahay macalinka ugu fiican. In la sameeyo gudbiyaha FM oo si toos ah loo socodsiiyo waxay noqon kartaa habka ugu wanaagsan ee lagu heli karo caymiska ugu saxsan ee gudbiyaha raadiyaha FM.
FMUSER waxay halkan ku soo jeedinaysaa inaad isku dayi karto inaad isticmaasho doorsoomayaal kala duwan oo aad samayso isbarbardhig tijaabo ah oo badan, tusaale ahaan, waxaad awoodaa:
1. Go'aami nooca anteenada (4-bay ama 2 bays anteeno FM waa mid weyn)
2. Go'aami dhererka gacangelinta anteenada (30 mitir ayaa ku filan, oo u dhiganta dhismo 15 sheeko ah)
3. Go'aami awoodda gudbiyaha raadiyaha (waxaad sidoo kale bedeli kartaa 200 Watts ilaa 500 Watts, iyo lidkeeda).
4. U hel goobo kala duwan sida barta gudbinta (ka fiirso haddii aad ku sugan tahay meel fidsan ama buuro ah ama aad ku sugan tahay buur)
5. Qor masaafada ugu fog ee baahinta waxaad ka heli kartaa calaamadaha raadiyaha cad ee barta gudbinta
6. Beddel doorsoomayaasha oo samee is barbar dhig waxa aad duubto.
Haddii aad ogaato in aysan jirin wax aad uga baahan tahay shaxda tixraaca caymiska gudbinta ee aan bixinay, fadlan na soo ogeysii marka ugu horeysa. FMUSER wuxuu kaa caawin karaa qiyaasida daboolida gudbiyaha raadiyahaaga.